Nagu saabsan - Beijing Jinglong Technology Carbon Gaarka ah Co., Ltd.
Beijing Jinglong Teknolojiyada Gaaska Gaarka ah ee Co., Ltd.
La aasaasay sanadkii 2009, Beijing Jinglong Gaaska Carbon Technology Co., LTD. waa soo saare xirfadle oo diiradda saaraya cilmi-baarista, soo-saarka, iibka iyo adeegga alaabada garaafka. Alaabtayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah koronto-garaafka, garaaf garaafka garaafka, caaryada garaafka, tubbada garaafka, garaafka garaafka, usha garaafka, garaafka daahirnimo sare, garaafka istiraatiijiga ah, iwm. iyo qalabka, oo ay ku jiraan xarunta mashiinka CNC garaafka, mashiinka axdi qarameedka CNC, lathe CNC iyo mashiinka wax lagu jaro oo weyn, mashiinka wax shiida dusha iwm. Intaa waxaa dheer, waxaan helnay shahaadada ISO9001 iyo shatigayaga soo dejinta iyo dhoofinta. Suuqgeena dibada waxaa ka mid ah South Korea, Singapore, Australia, USA, Japan, Canada, Germany, Pakistan iyo India. Waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa amarrada OEM iyo ODM. Haddii aad ka dooraneyso shey hadda jira buugyarahayaga ama aad ka dhigeyso shuruudo habeysan, waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad nala soo xiriirto.
EDM (Mashiinka Dheecaanka Korantada) Warshadaha
Warshadaha Injineeriyada Farsamada
Warshadaha Foornada Heerkulka
Warshadaha kiimikada iyo kiimikada
Khabiirka Warshadaha Shaxda
Waxaan diiradda saareynaa warshadaha waxsoosaarka garaafka muddo 10 sano ah, waxaan nahay shirkad wax soo saar iyo baaraandeg ballaaran oo ku takhasusay R & D iyo soosaarida alaabada graphite, siinta xalka dalabyada warshadaha kala duwan iyo ka baaraandegidda alaabada garaafka leh ee dhib badan.
Wax soo saar awood leh
Iyadoo lagu daboolayo aag 12000 mitir murabac ah, oo leh qalab farsameysan garaafka sare, waxaan leenahay awood wax soo saar sanadle ah oo ka badan 100 milyan oo gogo '.
Habayn shakhsi ahaaneed needs Macaamiisha baahiyaheeda iyo rajooyinkiisa ayaa is beddelaya, waxaan jeclaan lahayn inaan kuu samayno wax soo saar ku habboon adiga oo raacaya shuruudahaaga gaarka ah.
Cilmi-baaris madax-bannaan iyo horumarin
Waxaan dhisnay koox khibrad iyo xirfadba leh oo R & D ah. Iyada oo leh awood cilmi baaris oo madaxbanaan iyo awood horumarineed, waxaan soo saarnay taxane alaabooyin kala duwan oo leh heerar kala duwan oo qiimo ah si aan ula kulano shuruudaha iyo xulashooyinka kala duwan
Ku Saabsan Dhacdada